नेपालको नाम लिदै युक्रेनी राष्ट्रपति जेलान्सकीले गरिदिए यस्तो घोषणा — Imandarmedia.com
नेपालको नाम लिदै युक्रेनी राष्ट्रपति जेलान्सकीले गरिदिए यस्तो घोषणा
काठमाडौं। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलान्सकीले नेपालको नाम लिदै अनैठो घोषणा गरिदिएका छन्। उनको घोषणाले रुस झन् चिढीएको छ। नेपालमा पर्वतारोहणका लागि आउने रुसी नागरिकमाथि प्रतिबन्ध लगाउन युक्रेनले नेपाललाई आग्रह गरेको छ।
नेटोले ठ्याक्कै हाम्रो छेउमै (युक्रेनमा) पसल थाप्न चाहेको छ र उनीहरूसँग परमाणुअस्त्र छ,निकोलाई भन्छन्, “पुटिनले ठिक गरेका छन्। उनले तिनीहरूलाई त्यसो गर्न दिएनन्।
अन्तिमसम्म रुस अघि बढिरहनुपर्छ, कामबाट अवकाश पाएकी नीना इभानोभ्ना भन्छिन्।“रुसी टेलिभिजनमा यसबारे प्राप्त भएका कति सूचनालाई तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? मैले उनलाई सोधेँ।
उनको उत्तर थियो, म विश्वास गर्छु। किन विश्वास नगर्ने? मैले विश्वास नगर्ने भनेको इन्टरनेट हो।”इन्टरनेटलाई विश्वास नगर्नाको कारणबारे मैले सोध्दा उनले त्यसको कारण आफूलाई थाहा नभएको बताइन्।